Madax riyaad ninkkii qaadaaba uu dhigi. | Gabiley News Online
Madax riyaad ninkkii qaadaaba uu dhigi.
September 5, 2017 - Written by maxamed jeex
Dul kararan maxamed cali ( hooyaday baa tidhi) Ninkii galey halkii siyaasiga weyn ee Ahmed mumin seed ku hongoobay oo tegey dalka djibouti kana raadsaday xaqal jeeb uu xisbigiisa ugu ololeeyo .
Wararka ka soo baxaaya dalka jabuuti ayaa waxay sheegayaan in gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani maxamed cali ( hooyaday baa tidhi) uu u tegey dalkaasi inuu lacag ka raadsado nin ay isku reer dhaw yihiin oo ah maal qabeen reer jabuuti ah.
Waxa kale oo uu la kumay qawleysato reer jabuuti ah oo sheegata dhul ayna lahayn oo ku yaala xeebaha dalka somaliland.
Hadaba gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani maxamed cali ( hooyaday baa tidhi ) muxuu ka dooney dalka jabuuti???!!! Waa su,aal u baahan in laga jawaabo laakiin dadka siyaasada geeska afrika qaadaa dhigaa waxay ku tilmameen labo ilaa afar arimood inuu u tegey dalka jabuuti.
1. kow inuu dhaqaale ka raadiyo dadka hayb ahaan ay isku reero yihiin ee ka soo jeeda asal ahaan dalka itooboya ee aynu jaarka nahay gaar ahaan killilka 5 shanaad, dadka uu ka raadsaday gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee dalka jabuuti ka shaqeystaa badan koodu dalka jabuuti waxay soo galeen dagaalkii labaad kadib ( WORD WARD TWO:1945)
2. Laba sadaasha kale waxay sheegeysaa inuu la kulmey koox reer jabuuti ah oo sheegata xeebta dalka JSL kuwaasina waxaa la sheegayaa iney jiraan balan qaadyo siyaasadeed oo ay u sheegeen
3. Isku soo wada duubo laba nin oo ka tirsan kooxda reer jabuuti ah ee sheegata xeebta dalka JSL oo magacooda la qariyey & ninka maalqabeenka ee isna ay isku dhawyihiin gudoomiyaha xisbiga wadani maxamed cali oo aan magaciisa la sheegin ayaa waxaa la leeyahay waxay balan qaadyo farabadan u soo sameeyeen xisbiga wadani.
4. Hadaba maxaa ka suurtoobi kara heshiisyaddaa suuqa madaw laga kal saxeexday ay wada gadheen qawleysatada jabuuti & xisbiga wadani? Su,aashaa waxaa jawaabteeda iska leh shacabka reer SL………………..!Guntii somalidu waxay ku maahmaahdaa: Madax riyaad ninkkii qaadaaba uu dhigi gudoomiyaha xisbiga WADANI maxamed cali & kooxdan jabuuti waxaan leeyahay xisbigan cid ma qaadi kartee ninkii isku daya inuu qaadow adaa dhigi doona.